इलामको विमानस्थलमा बिमान अवतरण गरेपछि – cafeguff
इलामको विमानस्थलमा बिमान अवतरण गरेपछि
इलाम नगरपालिका–९ की विष्णुमाया चौहान घरमाथि फन्को मारेर विमान अवतरण हुँदा दङ्ग परिन् । विमानस्थलका लागि जग्गा दान नै गरेकी चौहान इलाममा विमान अवतरण गर्ला भन्ने विश्वासमा थिइनन् ।
प्रफुल्लित चौहानले भनिन्, ‘प्लेन चढ्ने रहर पूरा नहोला भन्ने पिर थियो । विमान सफल अवतरण भयो । अब केही समयमा नियमित उडानमा चढ्ने आशा बढ्यो ।’
मकै, अदुवा, फलफूल लगाएर जीवन चलाउने बारी नै विमानस्थललाई दिँदा त्यसबेला चित्त दुखेको सम्झिएकी मनमायालाई सोमबार आफैंले दिएको जग्गामा जहाज आएर बस्दा अचम्मित भइन् ।
‘आज धेरै खुसी छु, आफ्नै आँगनमा जहाज आयो । भोलिका दिनमा चढ्न पनि पाइएला,’ उनले थपिन्, ‘हामीले जग्गा दियौं, सरकारले लगानी ग¥यो, नेताले अगुवाइ गरे, यो असाध्यै राम्रो भएको छ ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले १३ चैत २०६७ मा विमानस्थलको शिलान्यास गर्दा आठ वर्षपछि विमान आउला भन्ने कमैले सोचेका थिए । तर २१ चैत, २०७५ ले दिएको खुसीमा रमाएका छन्, इलामवासी । खनाल सरकारपछिका सरकारहरूको पनि आलोचना मनग्यै भएका थिए । रकम निदिने, छुट्याइएको बजेटमा पनि रकम हुने, विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सर्वसाधारणले आस मारेका थिए । अझै पनि पूर्ण रूपले कहिलेदेखि विमानस्थल सञ्चालनमा आउला भन्ने चासो चाहिँ स्थानीयमा छ ।
फाल्गुनन्द सुकिलुम्बा विमानस्थल इलाममा तारा एयरको जहाज अवतरण गर्दै । जहाज हेर्न भेला भएका सर्वसाधारण ।
काठमाडौंबाट १९ सिट क्षमताको तारा एयरको ट्वीनअटर जहाज बिहान ११ बजेर ५७ मिनेट जाँदा सुकिलुम्बामा अवतरण गरेको थियो । काठमाडौंबाट १ घण्टा २ मिनेटको उडानपछि सफल अवतरण भएको जहाजका चालक दलका सदस्य क्याप्टेन सञ्जीव श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘इलाममा सुकिलुम्बालाई अब थप व्यवस्थित बनाउन सक्दा इलाम– काठमाडौं, इलाम–विराटनगर सजिलो गरी उडान भर्न सकिन्छ ।’
श्रेष्ठले विमानस्थल कच्ची भए पनि उडान र अवतरणमा समस्या नभएको बताए । विमानस्थलको बनावट, वरपरका डाँडाकाँडाको अवस्थितिले पनि साथ दिएको उनको प्रतिक्रिया थियो । उनले आफ्नो कम्पनीले यदि उडान भर्ने निर्णय ग¥यो भने उडानको सम्भावना रहेको पनि जानकारी दिए ।
विमानको चालक दलका अर्का सदस्य क्याप्टेन प्रभाकर घिमिरेले रनवेको सतह मिलाउनुपर्ने बताए । उनले अब विमानस्थललाई पक्की बनाउन अथवा ग्राभेल मात्र गर्न सकियो भने इलाममा निरन्तर जहाज उडान–अवतरण गर्न सकिने बताए ।
२०५८ सालदेखि जग्गा दान गर्न थालिएको सुकिलुम्बा विमानस्थलमा जहाज अवतरण भएपछि अत्यन्तै हर्षित देखिएका संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष तथा इलाम क्षेत्र नम्बर–२ का सांसद सुबासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘मेरो सपना पूरा भएको छ । अब यो विमानस्थललाई पूर्ण बनाउन हामी लाग्नेछौं ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले पनि खुसीको सीमा नरहेको बताए । आफू बिरामी अवस्थामा रहे पनि मन भने इलाममै रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
जिल्लामा पहिलोपटक जहाज आउने भएपछि सयौंको संख्यामा स्थानीयवासी र नजिकका विद्यालयका विद्यार्थीहरू विमानस्थल पुगेका थिए । अवतरण र उडान हुने थाहा पाएका सयौं इलावासी विमानस्थल पुगेका थिए । जहाज अवतरण गर्दा ताली बजाएर उनीहरूले स्वागत गरेका थिए । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गणेशप्रसाद बरालले जिल्लामा पहिलोपटक विमान उडाएर आएका चालक दलका सदस्यलाई फूलमालाले स्वागत गरे । जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रमुख, प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधिलगायतले चालकहरूलाई फूलमाला पहि¥याएका थिए ।
विमानस्थलमा ६८० मिटर रनवे र ३० मिटर चौडाइ छ । यो विमानस्थल ट्वीनअटर जहाजका लागि पर्याप्त हुने इन्जिनियर पुष्प नेउपानेले बताए । नेउपानेका अनुसार विमानस्थल ८ प्रतिशत स्लोभ (एकापट्टिबाट अर्कापट्टिको उचाइ ४५ मिटर अग्लो) छ ।
विमानस्थलको उडान र अवतरण हुने बिन्दुलाई प्राविधिक भाषामा ‘०८÷२६’ नामकरण गरिएको छ । पूर्वतर्फ विमानस्थलको होचो भाग (२६) बाट पश्चिमतिरको अग्लो भाग (०८) तिर गई विमान मैदानमा बस्ने र विपरीत दिशाबाट उडान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
धुले मैदान रहेको विमानस्थल आउँदो वर्ष ग्राभेल गर्ने योजना नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको छ । चालू आर्थिक वर्ष विमानस्थलको रनवेका लागि १० करोड र तल्लो भागमा सडक बनाउन ७ करोड रुपैयाँको काम
विमानस्थलका लागि अहिलेसम्म १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । रनवेलाई नालीसहित कालोपत्रेसम्मको अवस्थामा पु¥याउन अब १५ करोड रुपैयाँ लाग्न सक्ने भन्दै इन्जिनियर नेउपानेले टर्मिनल भवन बनाउन र सुरक्षा तारबार लगाउन पनि बाँकी रहेको जानकारी दिए ।
३२८ रोपनीमा विमानस्थल निर्माणाधीन छ । विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्न अब करिब ४५ करोड खर्च हुने अनुमान रहेको जनाइको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकले लेखेको छ !
अचानक र छिटो रिस उठ्ने समस्या छ ? यसो गर्नुहोस सबै ठिक हुन्छ
डोटीमा विश्व वतावरण दिवसको अवसरमा ५ हजार बिरुवा रोपिए